Work Begins on Myanmar-Korean Industrial Complex Projects | Myanmar Business Today
Home Business Local Work Begins on Myanmar-Korean Industrial Complex Projects
Work Begins on Myanmar-Korean Industrial Complex Projects
Construction work has started on two industrial complexes jointly developed by Myanmar and South Korea.
“Construction for the projects in Yangon Region and Bago Region will take three years,” said U Thant Sin Lwin, deputy director general of the Directorate of Investment and Company Administration (DICA).
The $120 million Korea-Myanmar Industrial Complex (KMIC), located on 550 acres of land in Hlegu Township, Yangon Region, isa60-40 joint venture between Korea Land and Housing Corporation and Myanmar’s Ministry of Construction. Korea’s Economic Development Cooperation Fund (EDCF) will providea$60 million loan for the project.
The other, $28 million project on 203.6 acre of land in Nyaung In Village, Bago Region is being developed by Tae Kaung Myanmar Development. The company and the Supervisory Committee for Establishing Factories of Bago Region signedaland lease agreement on November 15.
The two industrial complexes will include garment, textile construction, telecommunications and other manufacturing factories.
Korea is the sixth largest foreign investor in Myanmar, with 177 investments worthatotal of $3.9 billion. During South Korean President Moon Jae-in’s state visit to Myanmar in early September, the two governments signedapackage of agreements covering economic development cooperation through 2022.
မြန်မာ-ကိုရီးယားစီးပွားရေးပူးပေါင်းမှုအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေသော ရန်ကုန်နှင့်ပဲခူးရှိ စက်မှုဇုန်စီမံကိန်းနှစ်ခု၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော် မရှင်မှ သိရသည်။
”ရန်ကုန်တိုင်းရော ၊ ပဲခူးတိုင်းကဟာရော အခုလမှာ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ စတင်နေပါပြီ။ တည်ဆောက်ရေးကြာမြင့်ချိန် ကာလက သုံးနှစ်ပါ”ဟု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်စင်လွင် က ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ မြေဧက(၅၅ဝ)ပေါ်၌ ကန်ဒေါ်လာသန်း (၁၂ဝ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် Korea-Myanmar Industry Complex
စီမံကိန်းသည် Korea Land and Housing Corporation
(၆ဝ)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနက (၄ဝ)ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သည်။
စက်မှုဇုန်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ Economic Development Cooperation Fund(EDCF)
မှ ကန်ဒေါ် လာ သန်း(၆ဝ) ခန့် ချေးငွေထုတ်ပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ပဲခူးတိုင်း ညောင်အင်းကျေးရွာအုပ်စု မြေ ဧက (၂ဝ၃ဒသမ၆) ပေါ်၌ ဖော်ဆောင်မည့် စက်မှုဇုန်စီမံကိန်းသည် Tae Kaung Myanmar Development
က ကန်ဒေါ် လာ (၂၈)သန်းကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စက်ရုံအ လုပ်ရုံများ တည်ထောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော် မတီနှင့် ကုမ္ပဏီအကြား မြေငှားရမ်းစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေထိုးခဲ့သည်။
ယင်းစက်မှုဇုန်များအတွင် အထည်ချုပ် လုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း၊ ဆောက် လုပ်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစသော စက်မှု လုပ်ငန်းများဝင်ရောက်နိုင်စေရန် အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ ထည့်သွင်း တည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းများအတွက် စက်တင်ဘာ (၄)ရက်တွင် မြန်မာ-ကိုရီးယားစီးပွားရေးပူး ပေါင်းမှု စက်မှုဇုန် စတင်တည်ထောင်ခြင်းနှင့် မြန်မာ-ကိုရီးယားအတူတကွအောင်မြင်တိုး တက်ခြင်းနှင့်ချမ်းသာြ<ွကယ်ဝခြင်းတို့ မိတ် ဖက်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Lotte
ပြည်တွင်း၌ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း စီမံကိန်း(၁၇၇)ခုရှိပြီး ကန်ဒေါ်လာ (၃ဒသမ၉) ဘီလီယံအထိရှိကာ ဆဋ္ဌမမြောက် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများ ဆုံးနိုင်ငံဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleOnly 19 Companies in Kachin State Registered for Investment Privileges
Next articleCBM to Banks: Don’t Accept Untaxed Cash